Afar Qodob oo xal u noqon kara khilaafka Farmaajo iyo Rooble. | Warbaahinta Ayaamaha
Afar Qodob oo xal u noqon kara khilaafka Farmaajo iyo Rooble.
Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaara xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa u dhaxeeyaa khilaaf aad usoo shaac baxay muddooyinkii dambe oo kusoo aaday xilli lagu dadaalayay inay qabsoonto doorashada waqtigeeda ka dib dhacday.
Qaabka loo wajahay kiiska ku saabsan Ikraan Tahliil, oo xubin ka ahayd sirdoonka Soomaaliya.
Xil ka qaadista wasiirkii amniga gudaha oo wasaaraddiisa loo magacaabay qof kale.